FarfallaFVC-214C Vacuum Cleaner (1400 Watts) - အနက်ရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Farfalla FVC-214C Vacuum Cleaner (1400 Watts) - အနက်ရောင်
This Farfalla product isawonderful vacuum. Great suction and not too heavy or too loud. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ဖုန်စုပ်စက်ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင်ပင် လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်မည့် ခလုတ်များတပ်ဆင်ပေးထားသည့်အပြင် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်လည်နိုင်သောကြောင့် နေရာလပ်မကျန် သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပြီး အသံငြိမ်သောကြောင့် သုံးစွဲသူအကြိုက်တွေ့စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် FVC-214C Vacuum Cleaner (1400 Watts) - အနက်ရောင်